एक चार्जमा २४ सय किलोमिटर ? हो बन्यो यस्तो ब्याट्री | Automotive News Nepal
एक चार्जमा २४ सय किलोमिटर ? हो बन्यो यस्तो ब्याट्री ६ कार्तिक, २०७६
टेस्लाको ब्याट्रीलाई एक पटक फुल चार्ज गर्दा ३ सय किलोमिटर चलाउन सकिन्छ । यस्तै रेन्जमा हाल विभिन्न कम्पनीले इलेक्ट्रिक गाडीका लागि ब्याट्री प्रयोग गरिरहेका छन् ।
तर के एक पटकको फुल चार्जमा २ हजार ४ सय किलोमिटर गाडी चलाउन सकिन्छ ? डेली मेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार अब यो सम्भव भएको छ ।
बेलायतस्थित पूर्व नाभी कर्मचारी ट्रेभर ज्याकसनले यस्तै ब्याट्रीको विकास गरेका छन् । हाल प्रचलित लिथियम आयोन ब्याट्री नभएर यो चाहिं आल्मुनियम–एयर ब्याट्री हो । यसलाई सानो स्थानमै राख्न सकिन्छ, तौल पनि थोरै छ र यसले जहाज समेत चलाउन सक्छ ।
ज्याक्सन आफैले विकास गरेको यो ब्याट्रीलाई व्यावसायिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि मल्टी–मिलियन डलरको प्रस्ताव आएको छ । अस्टिन इलेक्ट्रिकले यसका लागि सम्झौता गरेको छ र अर्को वर्ष देखि १ हजार भन्दा बढी गाडीहरु यो ब्याट्रीबाट चल्ने छन् ।
सो ब्याट्रीको मूल्य पनि हाल प्रचलित लिथियम आयोन ब्याट्री भन्दा निकै नै कम छ । टेस्ला कार ब्याट्रीलाई ३० हजार पाउन्ड पर्छ भने आल्मुनियम–एयर ब्याट्रीलाई लगभग ५ हजार डलर मात्र पर्नेछ । त्यसैगरी यसलाई रिसाइकल गर्न समेत सकिन्छ, जसले गर्दा वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।
धादिङको पेट्रोल पम्पमा सिल
धादिङ – पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङका दुई पेट्रोल पम्पमा नापतौल तथा गुणस्तर वि...
सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट राराको लागि सिधा उडान सुरु
सुर्खेत–रारा एड्भेन्चर प्रा.लि र भेरी–कर्णाली ¥यापिड एड्भेन्चर प्रा.लि.को सहकार्...